Budada Raw Sustanon 250 - Soosaarayaasha & Bixiyeyaasha - Warshadda
Sustanon 250 waa mid ka mid ah steroids ugu fudud oo aad ka heli karto shaybaarka UG. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale u dhacdaa mid ka mid ah kuwa ugu qaalisan. Kalluunka Sustanon 250 waa nooca ugu caansan ee testosterones ka baxsan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta beddelidda testosterone si loo kordhiyo ninkii testosterone-ga ee heerarka caafimaadka leh. Iyada oo kor u qaadeysa heerarka testosterone guys waxay awoodaan inay dareemaan marar caadi ah oo caafimaad leh.
Caanaha Sustanon 250 video
Root Sustanon budada 250 Description
Sustanon waa magac ganacsi ee ku salaysan shidaal ku salaysan maadooyinka testosterone esterified.
Root Sustanon budada 250 waa isku-dar ah afar xeryood oo testosterone ah:
30 mg propionate testosterone
60 mg phenylpropionate testosterone
100 mg decanoate testosterone
Tirooyinka ku yaal magacyadu waxay tixraacayaan xaqiiqda ah in maadooyinka testosterone ee xaddidan kasta ay yihiin 250 iyo 100 mg / ml, siday u kala horreeyaan.
Qiimayaasha testosterone kala duwan waxay bixiyaan nus kala duwan. Kala-bixinta maaddooyinka testosterone waxay bixisaa daaweyn joogta ah (laakiin aan ahayn qiyaas) hormoonka testosterone laga bilaabo qashinka lagu duro galaaska plasma.
Inkastoo ujeedada ka iman karta qiyaasaha testosterone testersone ee Sustanon waa inay bixiyaan heerar dheeri ah ee testosterone ah, oo ah hal baaritaan oo muddo dheer ah, sida testosterone cypionate ama testosterone enanthate, waxay dhab ahaantii bixin kartaa heerar badan oo ah heerarka testosterone serum.
Sustanon waa habka la door biday ee beddelidda tijaabada ee UK.
Noockan tijaabada ayaa ah doorasho caan ah oo ah steroid anabolic oo ka mid ah jir-dhiseyaasha iyo cayaaraha.
Root Sustanon budada 250 Smamnuucista
Product Name Root Sustanon budada 250
Magaca Kiimikada Sustanon 250 budada
brand NAme Sustanon / Sustanon budada 250
Fasalka Daroogada /
Molecular Wsideed /
barafku Psaliid 33-40 ℃
Biological Life-Life 7-9 maalmood
Color budo crystal White
kaydinta Temperature qaboojiyaha
Application Sustanon waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo yaraanta testosterone ee ragga.
Waa maxay budada Root Sustanon 250?
Sustanon 250 waa mid ka mid ah steroids oo aad u caan ah waxaana loo isticmaalaa daawada iyo sidoo kale qaabeynta jirka. Xaaladaha intooda badan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo ragga oo leh heerarka hoose ee testosterone si loo hagaajiyo caafimaadka ragga. Kor u qaadista tijaabada waxay dib u soo celisaa caadiyan iyo caafimaadka ragga. Badeecada waxaa sidoo kale loo adeegsadaa beelaha jidhka. Waxay caan ku tahay natiijooyinkeeda weyn ee ah in ay gacan ka gaysato jir-dhiseyaashu inay leeyihiin dhakhso iyo aad u ballaaran ee murqaha.
Sidee budada loo yaqaan "Raw Sustanon" 250 shuqullada
Cirbadeynta sustanon waxaa ku jira qiyaasaha testosterone (testosterone propionate, phenylpropionate, isocaproate iyo decanoate). Kuwani waa derajo ka soo baxa hormoonada haweenka ee dabiiciga ah, oo ay soo saaraan xiniinyaha. Testosterone waa hormoonka ugu muhiimsan ee kobaca caadiga ah, horumarka iyo shaqada haweenka galmada ragga iyo astaamaha galmada.
Testosterone waxay lagama maarmaan u tahay wax soo saarista shahwada, wadidda galmada, helitaanka kacsiga, iyo shaqeynta qanjirka 'prostate' iyo qaababka kale ee taranka. Waxa kale oo uu leeyahay hawlaha maqaarka, murqaha, qalfoofka, kelyaha, beerka, dhuuxa lafta iyo habka dhexe ee dareenka.
Heerarka testosteron-ka ah ayaa si tartiib ah u dhacaya da'da isla markaana u dhacaya si dhakhso ah kadib marka qalliin looga saaro xiniinyaha (tusaale ahaan daaweynta kansarka tijaabada). Heerarku waxay sidoo kale dhici karaan cudurada tijaabada ah (hypogonadism ama eunuchoidism), ama cudur qanjirka pituitary (qanjirka maskaxda ee kontaroolaya hormoonka).
Heerarka hoose ee testosterone waxay sababi kartaa astaamo sida hoos u dhaca jinsiga, hoos u dhaca maqaarka (dhalmo la'aanta), dhalmo la'aan, daal, niyad jabka iyo daciifinta lafaha (osteoporosis).
Beddelitaanka tijaabada wuxuu oggol yahay heerarka testosterone dabiiciga ah in uu ku noqdo mid caadi ah wuxuuna yareeyaa calaamadaha yaraanta.
Root Sustanon 250 budo ah
Haddii tani ay tahay markii ugu horeysay ee aad isticmaasho Sustanon 250, ka dibna hal mar isbuuc laba jeer toddobaadkii waa in ka badan inta ku filan. 500mg / usbuuc waa qiyaas fiican oo bilaw ah oo loogu talagalay Testosterone iyo mid loo dulqaadan karo si badbaado leh.
Miisaan caadi ah wuxuu soconayaa toddobaadyada 8-12 iyadoo ku xiran hadafka qofka.
Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala xilligaas waxay u adeegsan karaan 1000 mg / toddobaad ama wax ka badan. Marka qiyaaso badani, khatarta ka iman karta saameyntu waxay noqoneysaa mid aad u daran.
Sustanon 250 waxaa lagu xakameyn karaa oo keliya qiyaasaha kale ee steroidka.
Root Sustanon budada 250 isticmaalka
Sustanon 250 waxaa loo isticmaalaa ragga qaangaarka ah ee beddelaada testosterone si loogu daaweeyo dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan oo keena maqnaanshaha testosterone (ragga labka ah). Tani waa in la xaqiijiyaa laba dhiig oo kala duwan oo dhiig ah, sidoo kale waxaa ku jira astaamaha daaweynta sida unugyada, dhalmo la'aanta, jimicsiga hooseeya, daal, niyadjabka muruqyada iyo lafaha lafaha oo ay keento heerarka hoormoonka hoose.
Sustanon 250 ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa inay noqoto daweyn taageero ah oo loogu talagalay gabdhaha-lab-dheddig-laboodka.
Soo iibso Sustanon 250 budada laga bilaabo Buyaas.com
Harris Ron; Dhaqdhaqaaqa jirka ee dhabta ah: Xaqiiqda muruqa ee sanadaha 25 ee xayiraadaha (2008) p.50
Nam Paul; Jimicsiga iyo Steroids: Sheeko Shakhsi ah (2017)
Spellwin Geaorge; Testosterone Cycle Cycle: Waxaa ka mid ah Sare Xigga 250 (2015)
Tilin Andrew; Doper Next Door: Sannaddayga Wanaagsan iyo Iskudhufan ee Waxqabadka-Horumarinta ... (2011) p 38,
Collins Rick; Murqaha sharciga: Anabolics in America (2002) p172, 173,427
Buugga Caruurta ee Chiu MC (2019) p.419